နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးစနစ်စတင်တော့မည် – YANGON STYLE
နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) မှာ အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးစနစ်ကို ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မှာ စတင်ပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Covid 19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာ တက္ကသိုလ်တွေ ပြန်လည်မဖွင့်လှစ်နိုင်မီအချိန် ကျောင်းပြီးဖို့လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ သင်တန်းအချို ကိုဖွင့်လှစ်ပို ချဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဇူလိုင်လမှာ မဖြစ်မနေ အွန်လိုင်းမှသင်ကြားပေးရမယ့် သင်တန်းတွေမှာ တရုတ်နိုင်ငံမှ လာရောက်သင်ယူတဲ့ မြန်မာစာကွ မ်းကျင်မှုသင်တန်း၊
မဟာဘွဲ့သင်တန်းနဲ့ ဘွဲ ့ယူရန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်သင်တန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် ရန်ကုန် ဟာ ကျောင်းရဲ စာသင်ခန်းတွေကို ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ဖုန်းထဲအရောက်ပို ့ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ရင်လည်း Covid 19 ရောဂါကြောင့် ခပ်ခွာခွာနေဖို စည်းကမ်းချက်ဟာ ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာသင်ခန်းမှာ ကျောင်းသားဦးရေ လျှော့ချပြီး သင်ကြားဖို စီစဉ်ထားပါတယ်။ အွန်လိုင်းနဲ ပို ချတဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာမှာအသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Moodle Learning System ကို ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း အသုံး ပြု ကာ ကျန်တဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို Microsoft Teams Video Conferencing System ကို အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဆရာဆရာမတွေဟာ ကျောင်းသားတွေအတွက် အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းထဲမှာ rescources တွေ၊ learning activity တွေ၊ workshop တွေကို ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းပေါင်း ၁၀ဝ ဖန်တီးထားရှိပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ၂၀ဝ လောက်အထိ ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအနေနဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူ ထောင်ချီပြီး စာရင်းသွင်းလက်ခံနိုင်ဖို ့လည်း ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်လို့ပါမောက္ခချုပ်က ပြောကြားထားပါတယ်။
နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် ရန်ကုန် မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို အွန်လိုင်းမှ သင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက် တက္ကသိုလ်ရှိဆရာဆရာမတွေကို E—Campus (Moodle) အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ် ၁ ကို ဧပြီလလယ်မှ စတင်ကာ ပါမောက္ခချုပ်ကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန် ကို အမှတ် ၁၁၉/၁၃၁ ၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး အချိန်ပြည့်သင်တန်း၊ အချိန်ပိုင်း ဒီပလိုမာသင်တန်းနဲ့ ညနေပိုင်းသင်တန်းတွေကို သင်ကြားပို့ချပေးနေပါတယ်။ သင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ ဘာသာတွေမှာ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ အီတာလျံ၊ ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ ထိုင်း နဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် မြန်မာဘာသာကို သင်ကြားပို့ချပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
By : Kyaw Thura Tun
Japan Myanamar ပွဲတော် ၂၀၂၁
ခေတ် နောက်ကိုမလိုက်ဘဲ ထာဝရ ဖက်ရှင်ကျ ကျော့ရှင်းလှပစေမယ့် Judy’s Fabric
ကိုဗစ်ကူးစက်မြန်ဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ် ပေါ်လာနိုင်ဟု ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသတိပေး
အောင်လပွဲ အောက်တိုဘာ ၃၀ သေချာပြီ !!! 💥💥💥💥
Apple မှ Iphone 12 မိတ်ဆက်ရောင်းချမည့်ရက်ကို ကြေညာ
“ ကျောက်ဖြူမြို့တစ်ဖက်ကမ်းက ပင်လယ်ပြင်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့ ငှက်ခေါင်းကျွန်း”
1. လူကြိုက်အမျာဆုံး Mask အဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ The SAEM ရဲ့ O2 Bubble Mask
2. Plus Size တွေအတွက် အဝတ်အစားဝယ်ယူဖို့အဆင်ပြေစေမယ့် ရန်ကုန်မြို့က ဆိုင် (၄) ဆိုင်
3. ရန်ကုန်ရဲ့ အလှပဆုံး ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို ရှာနေပါသလား ဒါဆိုရင်တော့ ဒီနေရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
4. ဟော့ပေါ့နဲ့ အကင်ကို ၇၇ဝဝ ဆိုလို့သွားစားခါမှ မျက်လုံးပြုးပြီးပြန်လာရတဲ့အဖြစ်
5. ရိုးသားစွာ ကြက်သားစားနိုင်ကြပါစေ
ရှိုင်းကိုကို (Deputy Pr
ခင်သူဇာသန့်ဇင် (O&M co
နန္ဒာ (၂၉ နှစ်၊ Executive